Dababka iskuullada ka dhasha oo kor u kacay - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Dababka iskuullada ka kaca oo mar kale aad kor ugu kacey, sida ku cad tirakoobka MSB. sawir: TT
Dababka iskuullada ka dhasha oo kor u kacay
La daabacay tisdag 9 oktober 2018 kl 15.45
Waxaa iminka lagu howlan yahay sidii loo nadiifin lahaa goobtii uu ku yiilay iskuul arroornimadii isniintii shalay gebi ahaan dab lagu basaasiyey ee ku yaala xaafadda Gottsunda ee magaalada Uppsala.
– Tallaabada ugu horreeysa waxaannu qaban doonnaa oo keliya howlaha ugu muhiimsan, sida uu sheegay David Wik, ahna madaxa gobolka ee waaxda waxyeelooyinka Relita oo arrimmahaa ku howlan.
Dabka ka kacay iskuulka Gottsunda ku yiilay ayaa ahaa mid aad u baaxad wayn, sidaasi oo ay tahay ayuu dabku sidiisaba caqabad ku yahay iskuullada.
Waa dhibaatooyin soo jirey laga soo bilaabo dhammaadkii sannadihii 1990, iyadoona tirakoobyadii ugu dambeeyey ee hayadda badbaadada bulshada iyo diyaargarowga (MSB) soo saartay muujineyaan in dababka iskuullada waxyeeleeyaa mar kale ey aad kor ugu kaceen, kuwaasina oo gaarey heerkii toban sannadood ka hor ey ku sugnaayeen.
– Dababka inta badan waxey ka kacaan musqulaha iyo meelaha kale ee la mid ah inta u dhexeeysa 11:00-14:00 maalinnimadii, sida uu sheegay Björn Björkman oo ka howlgala ururka iska caabinta dababka oo in muddo ah ku soo howlgalayay dababka ka kaca iskuullada.
– Dababka balballaaran waxey inta badan dhacaan habeenkii, waxeyna ka bilowdaan dibaddaha iskuullada iyo albaabbada.
Dhallaanka ayuu dhib ballaaran ka soo gaaraa kolka uu iskuulkoodu gubto. Waxay waayaan goobtii ey wax ku baranayeen. Waxaa gubta farshaxan iyo alaabooyinkii iskuulka u yiilley, isla markaana muddo ayay qaadataa inta howlihii tacliinti caadiyan ku soo noqoneyaan.
Iskuulka gubtay ee xaafadda Gottsunda ayaa lagu tuhunsan yahay iney ka dambeeyeen laba hablood oo aan iskuulka dhigan, waana fal inta badan sidaa u dhaca.